November 1, 2020 - Padaethar
သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ RELATIONSHIP ကို အဆုံးသတ်သင့်ပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာရပ် တွေ
November 1, 2020 by Padaethar
ချစ်သူ နှစ်ဦးရဲ့ ဆက်ဆံရေးခိုင်မြဲဖို့ နားလည်မှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားသင့်တယ်လို့ စာရေးသူကတော့ ယူဆပါတယ်။ ချစ်သူ ထားတာဟာ သင့်ဘ၀တစ်ခုလုံး စိတ်ဆင်းရဲနေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကိုချစ်လွန်းလို့ သူကိုယ့်အပေါ် ဘယ်လောက်ပဲ အနိုင်ယူယူ နှိပ်စက်နှိပ်စက် သူ့ကို လမ်းမခွဲနိုင်ဘူးဆို တာ ဖြစ်သင့်ရဲ့လား အချစ် ဆိုတာ စိတ်ဆင်းရဲဖို့လားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ သင်တို့နှစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး မှာ အခုဖော်ပြတဲ့ ပြဿနာတွေရှိနေရင် လမ်းခွဲလိုက်သင့်ပါတယ်။ ၁။ သင်လုံးဝမပျော်ဘူး သူနဲ့ အတူရှိနေတဲ့အချိန် မပျော်ဘူး ခံစားရတာ သက်သောင့်သက်သာမရှိဘူး စိတ်ဖိစီးမှုတွေပဲ အမြဲကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင် သင်တို့ဘာလို့ ရှေ့ဆက်သွားနေဦးမှာလဲ။ သင့်ကိုသင် ရိုးရိုးသားသား ၀န်ခံကြည့်လိုက်ပါ။ တကယ်မပျော်ဘူးလား။ ၂။ သင့်ကိုယ်သင် လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ခွင့်မရှိဘူး သင့် ချစ်သူ နဲ့ အတူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာ သင့်ကိုယ်သင် … Read more
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ချစ်တယ်လို့ပြောတာကတယောက်ယောက်ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာပြောပြဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်ပေမယ့်အဲဒီတနည်းပဲရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခံစားချက်တွေဖော်ပြတာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။တချို့ကစကားလုံးတွေသုံးပြီးတချို့ကအပြုအမူနဲ့ပြပါတယ်။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုလုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေကဒေါသထွက်စရာစိတ်ပျက်စရာတွေလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ BrightSideကသင့်ချစ်ရတဲ့လူတွေလုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာပြောစရာမလိုအောင်သိဖို့နည်း ၆နည်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁။သင်ပြောတာတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီလိုနားထောင်တယ်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ပြောတဲ့ပျေါ်စရာကော၊ဝမ်းနည်းစရာကောကိုနားထောင်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးတတ်တယ်ဆိုရင်၊သူတို့ကနားထောင်ပေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲသင့်တို့ဆက်ဆံရေးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပါတန်ဖိုးထားနေတယ်လို့ပြတာပါ။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ဆက်ဆံရေးကိုပိုခိုင်မာပြီးရိုးသားမှုရှိလာအောင်လုပ်နေတာပါ။ ၂။သင့်ရဲ့အချွဲအနွဲ့တွေကိုကြိုက်တယ်။ သင်ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာချွဲနွဲ့ရတာလဲဆက်ဆံရေးတခုမှာပျော်စရာပါပဲ။သင့်လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုချွဲရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ကိုပိုကောင်းစေချင်ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။အဲဒါတင်မကပါဘူး။နဖူးကိုနမ်းခြင်းနဲ့အနောက်ကသိုင်းဖက်ခြင်းတွေကစကားလုံးတွေမပါဘဲသင်ကအရေးကြီးကြောင်းကိုပြနေတာပါ။ ၃။သင့်ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အောင်တွန်းအားပေးတယ်။ ဆက်ဆံရေးတခုဆိုတာကသင်တို့အချိန်တွေထပ်တူကျတာမဟုတ်သလိုတနေကုန်စာပို့နေလို့လဲမရပါဘူး။နေ့တနေ့ကုန်သွားရင်မတူတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်ရှင်သန်ကြတာပါ။သင့်လက်တွဲဖော်ကအိမ်မက်တွေအောင်မြင်ဖို့တွန်းအားပေးပြီးသူ့ကိုအာရုံမစိုက်တာကိုအထွန့်မတက်ဘူးဆိုရင်တော့သူကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတာပါ။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်မှာလဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတာကိုနားလည်ခြင်းကရင့်ကျက်မှုနဲ့အချစ်စစ်ပါပဲ။ ၄။သင့်ကိုအိမ်မှာကူညီတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်ကအဝတ်လျှော်တာနဲ့တခြားအိမ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတာမညည်းညူဘူးဆိုရင်သင့်ကိုတူညီတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သဘောထားပြီးမျှဝေခံစားတာပါ။ဆက်ဆံရေးတခုမှာသာတူညီမျှစိတ်ရှိတဲ့သူကိုရှာဖို့အရမ်းခက်တဲ့အတွက်အဲလိုလူကိုတွေ့ရင်လက်မလွှတ်ပါနဲ့။ ၅။သူတို့ချစ်ရတဲ့တခြားလူတွေကိုသင့်အကြောင်းပြောဖို့ဝန်မလေးဘူး။ အရှင်းဆုံးလက္ခဏာကတော့သင့်လက်တွဲဖော်ကမိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုသင့်အကြောင်းမဖုံးထားတာပါပဲ။သင်တို့ပတ်သတ်မှုအကြောင်းတခြားသူကိုပြောဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကသင်နဲ့ထားတဲ့ကတ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာနဲ့အနာဂတ်ကိုသင်နဲ့သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ ၆။သင်တို့နှစ်ယောက်အပြင်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းလက်ချိတ်ထားတယ်။ လူကြားထဲမှာတောင်လက်ချိတ်သွားနေတာကလဲအဆင်ပြေပါတယ်။အဲဒါကိုအနီကတ်လို့သဘောထားရင်ရပါပြီ။သင်တို့နှစ်ယောက်ပတ်သတ်နေတယ်ဆိုတာတခြားသူတွေကိုပြနေတာပါ။အဲဒါကြောင့်လူကြားထဲမှာတောင်သင်နဲ့ခပ်ခွာခွာမနေနိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ Writer -Min Thu ( XYZ NEWS ) Unicode ဖွငျ့ဖတျရနျ သငျ့ကို တနျဖိုးထား၊ မထား ဆိုတာသိနိုငျတဲ့ သငျ့လကျတှဲဖျောရဲ့အပွုအမူမြား ခဈြတယျလို့ပွောတာကတယောကျယောကျကိုဂရုစိုကျတယျဆိုတာပွောပွဖို့အလှယျဆုံးနညျးဖွဈပမေယျ့အဲဒီတနညျးပဲရှိတာတော့မဟုတျပါဘူး။ခံစားခကျြတှဖေျောပွတာကတယောကျနဲ့တယောကျမတူပါဘူး။တခြို့ကစကားလုံးတှသေုံးပွီးတခြို့ကအပွုအမူနဲ့ပွပါတယျ။သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောကသငျ့ကိုလုပျပွတဲ့အပွုအမူတှကေဒေါသထှကျစရာစိတျပကျြစရာတှလေဲဖွဈနိုငျပါတယျ။ BrightSideကသငျ့ခဈြရတဲ့လူတှလေုပျပွတဲ့အပွုအမူတှကေဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာပွောစရာမလိုအောငျသိဖို့နညျး ၆နညျးကိုဖျောပွထားပါတယျ။ ၁။သငျပွောတာတှကေိုကိုယျပိုငျဒိုငျယာရီလိုနားထောငျတယျ။ သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောကသငျ့ပွောတဲ့ပြျေါစရာကော၊ဝမျးနညျးစရာကောကိုနားထောငျပွီးနှဈသိမျ့ပေးတတျတယျဆိုရငျ၊သူတို့ကနားထောငျပေးရုံတငျမဟုတျဘဲသငျ့တို့ဆကျဆံရေးရဲ့ယုံကွညျမှုကိုပါတနျဖိုးထားနတေယျလို့ပွတာပါ။သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောဆကျဆံရေးကိုပိုခိုငျမာပွီးရိုးသားမှုရှိလာအောငျလုပျနတောပါ။ ၂။သငျ့ရဲ့အခြှဲအနှဲ့တှကေိုကွိုကျတယျ။ သငျခဈြမိသှားတဲ့အခါမှာခြှဲနှဲ့ရတာလဲဆကျဆံရေးတခုမှာပြျောစရာပါပဲ။သငျ့လကျတှဲဖျောကသငျ့ကိုခြှဲရတာကွိုကျတယျဆိုရငျသငျနဲ့ရှိနတေဲ့အခြိနျကိုပိုကောငျးစခေငျြပွီးတနျဖိုးထားတယျဆိုတဲ့သဘောပါ။အဲဒါတငျမကပါဘူး။နဖူးကိုနမျးခွငျးနဲ့အနောကျကသိုငျးဖကျခွငျးတှကေစကားလုံးတှမေပါဘဲသငျကအရေးကွီးကွောငျးကိုပွနတောပါ။ ၃။သငျ့ရညျမှနျးခကျြတှအေောငျမွငျအောငျတှနျးအားပေးတယျ။ ဆကျဆံရေးတခုဆိုတာကသငျတို့အခြိနျတှထေပျတူကတြာမဟုတျသလိုတနကေုနျစာပို့နလေို့လဲမရပါဘူး။နတေ့နကေု့နျသှားရငျမတူတဲ့ရညျမှနျးခကျြနဲ့အိမျမကျတှအေတှကျရှငျသနျကွတာပါ။သငျ့လကျတှဲဖျောကအိမျမကျတှအေောငျမွငျဖို့တှနျးအားပေးပွီးသူ့ကိုအာရုံမစိုကျတာကိုအထှနျ့မတကျဘူးဆိုရငျတော့သူကသငျ့ရဲ့ကိုယျပိုငျအခြိနျကိုတနျဖိုးထားတာပါ။သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောမှာလဲသူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျအိမျမကျကိုအကောငျအထညျဖျောဖို့အခှငျ့အရေးရှိတာကိုနားလညျခွငျးကရငျ့ကကျြမှုနဲ့အခဈြစဈပါပဲ။ ၄။သငျ့ကိုအိမျမှာကူညီတယျ။ သငျ့လကျတှဲဖျောကအဝတျလြှျောတာနဲ့တခွားအိမျအလုပျတှကေိုလုပျရတာမညညျးညူဘူးဆိုရငျသငျ့ကိုတူညီတဲ့တနျဖိုးရှိတယျလို့သဘောထားပွီးမြှဝခေံစားတာပါ။ဆကျဆံရေးတခုမှာသာတူညီမြှစိတျရှိတဲ့သူကိုရှာဖို့အရမျးခကျတဲ့အတှကျအဲလိုလူကိုတှရေ့ငျလကျမလှတျပါနဲ့။ ၅။သူတို့ခဈြရတဲ့တခွားလူတှကေိုသငျ့အကွောငျးပွောဖို့ဝနျမလေးဘူး။ အရှငျးဆုံးလက်ခဏာကတော့သငျ့လကျတှဲဖျောကမိသားစုနဲ့ပတျဝနျးကငျြကလူတှကေိုသငျ့အကွောငျးမဖုံးထားတာပါပဲ။သငျတို့ပတျသတျမှုအကွောငျးတခွားသူကိုပွောဖို့ဝနျမလေးဘူးဆိုရငျတော့သူတို့ကသငျနဲ့ထားတဲ့ကတျတှကေိုတနျဖိုးထားတယျဆိုတာနဲ့အနာဂတျကိုသငျနဲ့သှားမယျလို့ဆိုလိုတာပါ။ ၆။သငျတို့နှဈယောကျအပွငျသှားတဲ့အခြိနျတိုငျးလကျခြိတျထားတယျ။ လူကွားထဲမှာတောငျလကျခြိတျသှားနတောကလဲအဆငျပွပေါတယျ။အဲဒါကိုအနီကတျလို့သဘောထားရငျရပါပွီ။သငျတို့နှဈယောကျပတျသတျနတေယျဆိုတာတခွားသူတှကေိုပွနတောပါ။အဲဒါကွောငျ့လူကွားထဲမှာတောငျသငျနဲ့ခပျခှာခှာမနနေိုငျဖွဈနတောပါ။ Writer -Min Thu ( XYZ NEWS )
ယောက်ျားလေးတွေက ရည်းစားသက်တန်းနည်းနည်းကြာလာတာနဲ့ ပျင်းလာတယ်။ ပျင်းတာနဲ့အမျှ မိန်းကလေးတွေကို လှည့်စားလာကြတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိမှာပါ။ ဒါမဲ့ တချို့ကောင်လေးတွေကတော့ တကယ်ချစ်ရင် သူတို့မဖောက်ပြန်မိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းကြတယ်။ တချို့အချက်လေးတွေသူတို့ဖောက်ပြန်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို အတိအကျပြောပြနေတယ်။ ၁)သူ သင့်ကိုဆို အမြဲရိုးရိုးသားသားဆက်ဆံတယ်။ ကိစ္စ သေးသေး ကြီးကြီး အကုန်လုံးရိုးရိုးသားသား ဖွင့်ပြောပြတယ်။ သူခံစားချက်တွေကို အမှန်အတိုင်းပြောပြရလို့လည်း သူရှက်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ သင် သူ့ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်လက်ခံမယ်ဆိုတာကို သူသိထားတယ်လေ။ ၂) သင်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရဖို့ အမြဲကြိုးစားနေတယ်။ သင် သူဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကို သိဖို့ဖုန်းဆက်စရာမလိုဘူး။ သူကဘဲ အမြဲဘယ်ရောက်နေတယ်၊ ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားနေမှာ။ ၃) သူအမြဲအလုပ်ရှုတ်နေတယ်။ ဆိုတော့ သူဖောက်ပြန်ဖို့စဉ်းစားဖို့နေနေသာသာ သူ့ခေါင်းထဲယောင်လို့တောင် တွေးမိမှာမဟုတ်ဘူး။ ၄) အရင်ရည်းစားတွေနဲ့ လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်။ ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများက အရင်ရည်းစားတွေနဲ့ ပြန်ပြီးဖောက်ပြန်တတ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် … Read more
ကျွန်မ ဒါတွေဂရုမစိုက်ဘူး ရှင့်စိတ်ကိုပဲကျွန်မသိချင်တယ်။ ရှင် ကျွန်မကိုကြိုက်လား….
“ကျွန်မ ရှင့်ကိုကြိုက်တယ်””ငါမှာမိန်းမရှိတယ်လေ” ယောကျာ်းက လက်မှာဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကို ပွတ်သပ်ရင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ “ကျွန်မ ဒါတွေဂရုမစိုက်ဘူး။ ရှင့်စိတ်ကိုပဲကျွန်မသိချင်တယ်။ ရှင် ကျွန်မကိုကြိုက်လား” ဒီအဖြေကို ကြိုတွေးမိကြမှာပါ။ ယောကျာ်းက ခေါင်းမော့ပြီးကောင်မလေးကိုသေ ချာကြည့်လိုက်တယ်။ မိန်းကလေးက အသက် (၂၄)နှစ်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုတယ်။ အရွယ်ကောင်းတဲ့အသက်အရွယ်ပါ။ အသားအရေဖြူစွတ်တယ်။ ဖျတ်လတ်သန်စွမ်းတယ်။ အရောင်တောက်ပြီးစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်ဝန်းတစုံ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ “တကယ်လို့ ရှင်လည်းကျွန်မက သဘောကျတယ်ဆိုရင် ကျွန်မရှင်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ချင်တယ်” စိတ်မရှည်တဲ့အဆုံးမှာကောင်မလေးက ဒီစကားကို ထပ်ပြောလိုက်တယ်။ “ငါ့မိန်းမကိုငါချစ်တယ်” ယောကျာ်းက ပြတ်ပြတ်သားသားဖြေလိုက်တယ်။ “ရှင် သူ့ ကိုချစ်တယ်? သူ့ ကိုဘယ်လိုချစ်တာလဲ? အခုလက်ရှိ သူ့အသက်အရွယ်က အိုနေပြီ အရင်လိုကြည့်မကောင်းတော့ဘူးမလား? အဲဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီက ပါတီပွဲကို ရှင်တခါမှ မခေါ်လာရဲတာမလား ••••” ကောင်မလေးက ဆက်ပြောသွားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောကျာ်းရဲ့ အေးစက်စက်အကြည် … Read more
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် မိန်းကလေးဆိုတာမျိုးက အချော့ကြိုက်တယ်၊ ကိုယ့်ကို အလိုလိုက်တာမျိုးကို သဘောကျကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ဦးစားပေးသလို သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ပြတဲ့ ယောက်ျားမျိုးဆိုရင် ကြွေမှာပဲမဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ ယုံချင်စရာမကောင်းဆုံး ယောက်ျားတွေပါ။ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပြတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီဆို ဒီအချက်တွေကိုသာ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ ၁။ ငြင်းခုံမှုမရှိတာ ကိုယ်နဲ့သူ့ကြားမှာ အငြင်းပွားစရာ တစ်ခုခု ဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့။ ဥပမာ ဘောပွဲလောင်းမိတာမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီအခါ ” ငါက ယောက်ျားလေးပဲ ဒါမျိုးတော့ အနည်းအကျဉ်း လုပ်မိမှာပဲ” ဆိုပြီး ပြောလာရင် စိတ်မဆိုးလိုက်ပါနဲ့။ သူက အမှန်ပြောနေတာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပြောတာကို စသလိုနောက်သလိုနဲ့ စကားလမ်းကြောင်းလွှဲပစ်တာမျိုးက နောက်ကွယ်မှာ ထင်တိုင်းကြဲမယ့်သဘောပါပဲ။ ၂။ ကိုယ်အလုပ်များနေရင် စိတ်ကောက်တယ် ချစ်သူကောင်း ယောက်ျားကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ကောင်မလေး အလုပ်များနေရင် နားလည်ပေးတတ်တာချည်းပါပဲ။ … Read more
(၂၁)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဉ် ၁.၁၁.၂၀၂၀ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဌ ၁၁၁၉၃၇ သိန်းတစ်သောင်း ယ ၅၃၉၃၅၄ သိန်းငါးထောင် ဝ ၃၇၅၆၀၁ ကဂ ၉၀၄၉၇၀ သိန်း၂ဝဝဝဆု ဓ ၆၇၄၆၈၉ ဂ ၃၉၃၂၀၃ အ ၁၀၁၄၃၆ သိန်း၁ဝဝဝဆု အ ၁၃၀၈၂၁ ကခ ၅၂၂၁၅၂ ဒ ၇၁၅၀၆၆ သ ၇၅၈၅၂၂ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃) သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း၅လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည် ဇ ၅၃၄၉၆ ကင ၂၂၅၄၁ ဃ ၃၈၅၆၈ ယ ၃၁၂၂၂ ကဃ ၉၇၃၅၄ ဟ ၂၁၄၆၉ ယ ၅၆၅၂၅ ဟ ၂၁၄၆၉ ဠ ၁၁၅၅၆ သ ၇၄၀၉၇ ထ ၃၄၈၂၆ … Read more